Internet Explorer enweghị ike igosipụta ibe weebụ: kedu ihe ị ga-eme? | Nzukọ mkpanaaka
Internet Explorer enweghị ike igosipụta ibe weebụ: kedu ihe ị ga-eme?
Edere Ferreno | 11/05/2022 10:00 | Internet
Internet Explorer bụ ihe nchọgharị nke soso nwere ọnụnọ na ahịa. Ọ bụ ezie na a ka na-eji ya na ngwá ọrụ ochie, ọtụtụ ndị na-anọgide na-eji ya eme njem. Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe nwere ike ịkpata nsogbu, ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe ọhụrụ ịhụ ozi na Internet Explorer enweghị ike igosipụta ibe weebụ.
Nke a bụ nsogbu na-akpasu iwe nke na-egbochi gị inwe ezigbo ahụmịhe nchọgharị. Na mgbakwunye, ọtụtụ ndị ọrụ amaghị ihe ha kwesịrị ime n'oge ịdọ aka ná ntị a pụtara na ihuenyo. Ya mere, anyị ga-agwa gị ihe n'okpuru. Anyị na-ahapụ gị ihe ngwọta iji nwalee mgbe anyị nwere ọkwa na Internet Explorer enweghị ike igosipụta ibe weebụ.
Isi mmalite nke ozi a nwere ike ịdị iche iche, ya bụ, enwere ọtụtụ ihe kpatara na ọ ga-apụta na ihuenyo PC n'oge ahụ. Ozi ọma ahụ bụ na anyị nwere ọtụtụ ihe ngwọta anyị nwere ike ịnwale na nke a. Ka anyị wee mee ka webụ ahụ gosipụta ọzọ na ihe nchọgharị ahụ nke ọma. Ọ bụ ezie na anyị ga-eburu n'uche na ọ bụ a dịtụ ochie nchọgharị, n'ihi ya, ọ bụghị mgbe niile na-arụ ọrụ nke ọma.
N'aka nke ọzọ, ọ dị mkpa iburu n'obi na ihe nchọgharị ahụ nkwado ga-agwụ ngwa ngwa. Ngwa desktọpụ Internet Explorer 11 ga-ala ezumike nka ma ọ gaghị enwe nkwado na June 15, 2022, dịka Microsoft n'onwe ya kwadoro. Yabụ n'oge na-adịghị anya ihe nchọgharị a agaghị enwe ike iji ntụsara ahụ yana anyị nwere ike ịnwe ọtụtụ nsogbu ndakọrịta mgbe ị na-eji ya.
1 Njikọ Internetntanetị
2 mperi ibe
3 Hichapụ akụkọ ihe nchọgharị
4 Lelee proxy na ntọala DNS
5 Tọgharia ntọala Internet Explorer
Otu n'ime nlele mbụ na nke a bụ ịhụ ma njikọ ịntanetị gị bụ ihe kpatara ya ihe kpatara na ị nweghị ike ịnweta webụsaịtị ahụ. O nwere ike ịbụ na njikọ anyị adaala. Ọ bụrụ na nke a emee, mgbe ahụ, anyị enweghị ike ịnweta ibe weebụ na ihe nchọgharị ahụ nwere ike ibu ụzọ hapụ anyị ịdọ aka ná ntị a ma ọ bụrụ na anyị agbalị ime ka anyị dị ọhụrụ, ọ ga-ahapụ anyị mara na ọ dịghị njikọ Ịntanetị n'oge ahụ. Nke a bụ ihe nwere ike ime n'ọtụtụ ọnọdụ.
Anyị nwere ike ịnwa imepe ibe weebụ ọzọ ma ọ bụ jiri ihe nchọgharị ọzọ ma ọ bụ ngwa chọrọ njikọ ịntanetị n'oge ahụ. N'ihi na ọ bụrụ na nhọrọ ndị ọzọ a adịghị arụ ọrụ, mgbe ahụ anyị nwere ike ikpebi na ọ bụ njikọ Ịntanetị bụ nsogbu, ihe kpatara na ibe weebụ a anaghị ebu ma ọ bụ na-egosighi ya. Kedu ihe anyị nwere ike ime ma ọ bụrụ na njikọ ahụ na-ada ugbu a?
Malitegharịa ekwentị mọstem: Ihe kacha mma anyị nwere ike ime n'oge ahụ bụ ịgbanyụ modem n'ụlọ, chere sekọnd ole na ole ma mgbe obere oge gasịrị, anyị nwere ike ịgbanye ya ọzọ. Ọtụtụ oge ịmalitegharị njikọ WiFi n'ụlọ na-enyere aka dozie ụdị nsogbu ndị a.
Jikọọ na kwụpụ netwọk na PC: Ọ nwekwara ike ime na ọ bụ a nwa oge ọdịda na PC. Ya mere, kwụpụ PC gị na netwọk ahụ ma mgbe sekọnd ole na ole gachara, jikọọ ya ọzọ. Nke a nwekwara ike inye aka n'ọnọdụ ndị a.
Ihe ọzọ kpatara anyị ji enweta ozi na Internet Explorer enweghị ike igosipụta ibe weebụ ọ nwere ike ịbụ mmejọ nke weebụsaịtị n'onwe ya. Enwere ike inwe nsogbu na webụsaịtị a ma ọ bụ sava ya, nke na-egbochi anyị ịbanye na ya. Ọ bụghị ihe ọhụrụ maka sava nke weebụsaịtị ụfọdụ agbadala ma ọ bụ nwee nsogbu n'otu oge. Ọ bụrụ na nke a emee, anyị agaghị enwe ike ịnweta ya. Ya mere, ọ bụghị ihe anyị nwere ike ịchịkwa na nke a.
Ya mere, anyị nwere ike ịnwale mepee ibe weebụ a na ihe nchọgharị ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ. Ebe ọ bụ na otú ahụ anyị ga-enwe ike ịhụ ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ na ọ bụghị. Ya bụ, ọ bụrụ na ọ ka na-agaghị ekwe omume ịnweta webụsaịtị a na ngwaọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ na ihe nchọgharị ọzọ, mgbe ahụ anyị nwere ike kpebielarị na ọ bụ mmejọ na weebụsaịtị a na-ajụ. Yabụ na anyị enweghị ike ịme ihe ọ bụla, mana site na ibe weebụ a, ha ga-edozi nsogbu a ka ndị ọrụ wee banye ọzọ.
Hichapụ akụkọ ihe nchọgharị
Ihe a na-atụkarị aro maka nsogbu ụdị a na Internet Explorer doro anya nchọgharị akụkọ ihe mere eme. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ na-emetụta cache, kuki ma ọ bụ chịkọbara data sitere na weebụsaịtị na ihe nchọgharị n'onwe ya. Ya mere, ọ bụrụ na ehichapụ ozi a, anyị nwere ike ịnweta webụsaịtị ọzọ, ka ozi a kwụsị ịpụta na ihuenyo. Ọ bụ ihe na-arụkarị ọrụ n'ọtụtụ oge, ya mere ọ bara uru ịnwale ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime nke a, usoro ị ga-eso bụ:
Mepee Internet Explorer na kọmputa gị.
Pịa Alt iji gosi mmanya menu.
Na Ngwaọrụ menu, pịa nhọrọ Nhọrọ Internetntanetị (Nhọrọ maka ịntanetị).
Na akụkọ ihe mere eme nchọgharị, pịa nhọrọ ihichapụ.
Họrọ igbe niile ịchọrọ ịlele na nke a wee pịa nhọrọ Hichapụ.
Hapụ ihe nchọgharị ahụ wee malitegharịa Internet Explorer.
Gbalịa ịbanye webụsaịtị ahụ ọzọ.
Ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ kuki ma ọ bụ data a chịkọbara na Internet Explorer, anyị nwere ike ịbanye na webụ ọzọ. Nke a bụ ngwọta nke na-arụ ọrụ nke ọma na ụdị ọnọdụ a, ya mere ọ nwere ike ịba uru ịnwale. Na mgbakwunye, ọ bụ ihe anyị nwere ike ime n'agbanyeghị ụdị ihe nchọgharị anyị nwere na kọmputa. Ya mere, ndị ọrụ niile ga-enwe ike ime nke a n'ọnọdụ ha.
Lelee proxy na ntọala DNS
A na-eji ntọala proxy agwa Internet Explorer adreesị netwọk nke ihe nkesa etiti, nke a na-eji n'etiti ihe nchọgharị na ịntanetị. Na ndabara, Internet Explorer na-achọpụta ntọala proxy na-akpaghị aka. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike bụrụ na agbanweela nhazi a na mgbe ahụ nsogbu njikọ ndị a na-ebilite na kọmputa anyị. Nke a nwere ike ịbụ ihe kpatara na anyị enweghị ohere na webụsaịtị ahụ.
N'echiche a, anyị ga-enyocharịrị Internet Explorer chọpụta ntọala proxy na-akpaghị aka. N'ihi na ọ bụrụ otú ahụ, ihe niile dị mma. Mana ọ bụrụ na achọpụtaghị ya na akpaghị aka, mgbe ahụ anyị nwere nsogbu na ihe nchọgharị ahụ. Usoro ị ga-eso na nke a bụ:
N'ime igbe dị n'ebe a na-achọ ọrụ nke PC gị, pịnye "Nhọrọ Ịntanetị"
Họrọ nhọrọ na aha ahụ, nke bụ nke njikwa njikwa nke kọmputa.
Gaa na njikọ njikọ.
Pịa Ntọala LAN.
Gaa na nhọrọ chọpụta ntọala na-akpaghị aka.
Lelee na enwere ọpịpị na-esote nhọrọ a.
Ọ bụrụ na ọ nweghị, lelee nhọrọ a ka ịnwe pịa ahụ.
Pịa OK wee pụọ na ngalaba a.
Tọgharia ntọala Internet Explorer
Enwere ike bute nsogbu ahụ site na ntọala ihe nchọgharị. Ọ bụrụ na agbanweela nhazi a, enwere ike ịnwe mgbanwe na ọrụ ihe nchọgharị a na PC, yabụ nke a nwere ike ịbụ ihe kpatara na anyị enweghị ohere ịnweta ibe weebụ kwuru. Ya mere, anyị nwere ike ime mkpebi tọgharịa Internet Explorer ka ọ bụrụ ntọala ndabara na-atụ anya na nke a ga-arụ ọrụ iji dozie nsogbu ahụ. Usoro ị ga-eso iji mee nke a bụ:
Pịa na menu Ngwaọrụ dị na ihe nchọgharị ahụ.
Chọọ maka nhọrọ ịntanetị na menu ahụ.
Pịa na taabụ Nhọrọ dị elu.
Pịa na Tọgharia nhọrọ.
N'ime igbe na-ahapụ Internet Explorer Settings Default, pịa Tọgharia.
Gosipụta omume a ọzọ.
N'igbe na-esote, pịa nhọrọ Mechie.
Malitegharịa ekwentị Internet Explorer na kọmputa gị.
N'ọtụtụ ọnọdụ nke a ga-arụ ọrụ. Ozugbo ịmaliteghachiri ihe nchọgharị ahụ, gbalịa ịnweta ibe weebụ a ọzọ. O yikarịrị, Internet Explorer enweghị ike igosipụta ibe weebụ ahụ ga-akwụsị ịpụta ma ị ga-enwe ike ịnweta ibe weebụ ahụ nke ọma. Ya mere, edozila nsogbu ahụ n'ụzọ dị otú a na ọ bụ nsogbu na nhazi ugbu a nke ihe nchọgharị n'onwe ya.
Otu nlele ikpeazụ na nke a bụ antivirus ị nwere na kọmputa gị. Ọ nwere ike na-etinye aka na ọrụ Internet Explorer n'oge ahụ, nke nwere ike ịpụta na ọ na-egbochi ịnweta ụfọdụ ibe weebụ ma ọ bụ na-eme ka ihe nchọgharị ahụ ghara ịrụ ọrụ n'ozuzu ya. Nke a bụ ihe anyị nwere ike ịlele na ngalaba Zoo ọrụ Microsoft niile n'ime nhazi sistemụ. A ghaghị gbanyụọ ihe niile ebe ahụ wee nwee ike ịmalitegharị kọmputa na ihe nchọgharị ahụ.
Ị ga-egbochi mmemme ndị ọzọ ịnweta ma ọ bụ tinye aka na ọrụ nke Internet Explorer. Nke a nwere ike ịbụ ihe kpatara na anyị enweghị ohere ịnweta weebụsaịtị n'oge ahụ. Ọ nwere ike ime ma ọ bụrụ na anyị agbanweela nhazi n'oge na-adịbeghị anya ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị etinyela antivirus ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Internet Explorer enweghị ike igosipụta ibe weebụ: kedu ihe ị ga-eme?
Otu esi jikọọ Alexa na telivishọn yana ndụmọdụ maka ojiji
Ihe ime ụlọ ihi ụra gị kwesịrị ịbụ ụlọ egwuregwu